DEG-DEG: Kooxda Barcelona oo dalab cajiib ah kasoo gudbisay Neymar Jr – Gool FM
DEG-DEG: Kooxda Barcelona oo dalab cajiib ah kasoo gudbisay Neymar Jr
Dajiye July 18, 2019
(Spain) 18 Luulyo 2019. Shabakada caanka ah ee Sky Sport ayaa sheegtay war layaab leh, kaddib markii ay xaqiijisay in Barcelona ay dalab rasmi ah miiska soo saartay si ay kala soo saxiixato Neymar Jr kooxda Paris St Germain.
Sky Sport ayaa sheegtay, sida ay ku waramayaan ilaheeda gaarka, in Barcelona ay u soo bandhigtay Paris St Germain dalab gaaraya € 90 million lagu daray laba ciyaaryahan, si ay ula saxiixato Neymar Jr suuqan xagaaga.
Sida ay shaacisay shabakadan caalamiga ah, kooxda Barcelona ayaa u soo bandhigtay PSG liis ka kooban 6 ciyaaryahan si ay kaga doorato 2 ka mid ah, iyagoo qeyb ka noqon doona heshiiska uu Neymar dib ugu soo laabanayo garoonka Camp Nou.
Xiddigaha Coutinho, Dembele, Rakitic, Semedo iyo Malcom ayaa ka mid ah liiska xiddigaha 6-da ka kooban ee ku jiri kara heshiiska uu Neymar dib ugu laaban karo kooxda Barcelona.
Edwin van der Sar oo fariin u diray kooxda Juventus kaddib heshiiska Matthijs de Ligt
Kaddib imaatinka xiddigo cusub, taageerayaasha Real Madrid oo si cad u sheegay in wali Barcelona ay tahay kooxda fiican